Nahoana no tsy miseho amin'ny iPhone-ko ny emoticons? iPhone News
Nahoana no tsy miseho amin'ny iPhone-ko ny emoticons?
Ignatius Room | 24/04/2022 12:00 | Fampianarana sy torolàlana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny antony Nahoana no tsy miseho amin'ny iPhone ny emoticons?. Ny emoticon dia, nandritra ny taona maro, no fomba haingana indrindra sy mora indrindra hanehoana ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po indrindra.
Tamin'ny fahatongavan'ireo memoji, Apple dia nanitatra ny fahafahan'ny emojis, mamela ny mpampiasa mamorona emoticon manokana amin'ny tavanao. Raha nijanona tsy nampiseho emoji ny fitaovanao na mbola tsy nanana izany safidy izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny antony sy ny vahaolana azo atao.
1 Emoticons tsy miseho amin'ny iPhone-ko
1.1 fitaovana taloha
1.2 Fitaovana tsy misy fanavaozana ny kinova farany
1.3 Voafafa ny fitendry ny emojis
2 Ahoana ny fametrahana ny fitendry emoji amin'ny iOS
3 Ahoana ny fampiasana emoticons amin'ny iPhone
4 Ahoana ny fanoloana teny amin'ny emojis amin'ny lahatsoratra amin'ny iPhone
5 Ahoana ny fampiasana emoticons amin'ny Mac
6 Ahoana ny fametrahana klavier amin'ny iPhone
7 Ahoana ny fanesorana klavier amin'ny iPhone
Emoticons tsy miseho amin'ny iPhone-ko
Ny antony mahatonga ny fanontaniana hoe nahoana no tsy miseho amin'ny iPhone ny emoticons dia fintinina amin'ny 3:
Fitaovana tsy misy fanavaozana ny kinova farany
Voafafa ny fitendry ny emojis
Apple dia nampiditra emojis tamin'ny Navoaka ny iOS 5, dikan-teny tsy nahatratra ny iPhone 3G. Raha tsy mampiseho na tsy mamela ny fampiasana emojis ny fitaovanao dia efa fantatrao ny antony.
El Nijanona tamin'ny iOS 3 ny iPhone 4G. Tsy azo inoana fa, amin'izao fotoana izao, misy mpampiasa afaka manohy mampiasa ity fitaovana ity.
Na izany aza, azo inoana fa ireo fitaovana izay tonga eny an-tsena taty aoriana, tsy nohavaozina amin'ny dikan-teny vaovao izay nanomboka nampiditra fanohanana emojis.
Indraindray, Apple dia mampiditra emojis vaovao amin'ny alàlan'ny fanavaozana rindrambaiko. Mba hahafahana mijery sy mampiasa ireo emojis ireo dia ilaina ny mametraka ny kinova farany an'ny iOS.
Tsy vitan'ny hoe afaka mankafy ny emojis, fa noho izany fomba izany, ny iPhone dia ho voaro foana alohan'ny vulnerability rehetra hita ao amin'ny rafitra sy ny fampiharana izay mamorona azy.
Raha havaozina amin'ny kinova farany ny fitaovantsika ary tsy miseho na aiza na aiza ny emojis, Ny olana dia eo amin'ny klavier an'ny emojis.
Raha tsy nametraka ny klavier emoji izahay, tsy azo atao ny mampiasa azy ireo amin'ny fitaovantsika. Ny hany vahaolana hamahana ity olana ity dia ny fametrahana indray ny fitendry emoji amin'ny iPhone.
Ahoana ny fametrahana ny fitendry emoji amin'ny iOS
Para mametraka fitendry, na ny an'ny emojis na ny an'ny fiteny hafa, tsy maintsy manatanteraka ny dingana izay hasehoko anao eto ambany isika:
Miditra amin'ny Fikirana ny fitaovanay amin'ny alàlan'ny efijery.
Ao anatin'ny toe-javatra, tsindrio eo General.
Manaraka, tsindrio eo Ohatra > Teclados
Tsindrio eo Manampia fitendry vaovao.
Ao amin'ny lisitra dia mitady Emoji ary tsindrio eo amin'ny fametrahana.
Para mametraka kitendry amin'ny fiteny hafa, tsy maintsy manao dingana mitovy isika.
Ahoana ny fampiasana emoticons amin'ny iPhone
Raha vantany vao nametraka ny fitendry emoji amin'ny iPhone isika, rehefa miditra amin'ny klavier isika dia misy kisary emoticon aseho eo amin'ny efijery. zoro ambany havia amin'ny fitendry.
Ny fipihana eo dia samy hampiseho ny memoji manokana izay noforoninay, ary koa ny fitambaran'ny emojis manontolo tafiditra ao amin'ny dikan-iOS napetrakay.
Saingy, raha ankoatry ny fitendry amin'ny teny espaniola sy ny emojis, dia nametraka fitendry amin'ny fiteny hafa izahay, ilay kisary manome antsika fahafahana miditra amin'ny emoticons. eo ankavanan'ny bokotra izay manome antsika fahafahana hahazo isa sy tarehintsoratra manokana.
Raha tsindrio ny izao tontolo izao, ny fitendry aseho eo amin'ny zorony ambany havia, ny kitendry dia hiova eo amin'ireo napetraka rehetra. Raha tsindriana foana izy io, dia haseho miaraka amin'ireo kitendry napetraka rehetra ny fampidinana midina.
Ahoana ny fanoloana teny amin'ny emojis amin'ny lahatsoratra amin'ny iPhone
Rehefa miditra amin'ny fampiharana rehetra isika, iOS ho azy manolotra emoji mifototra amin'ny teny izay nosoratanay tao amin'ny bara fanoloran-kevitra. Raha te hampiasa an'io emoji io isika dia tsy maintsy manindry azy fotsiny dia hosoloina emoji ilay teny.
Raha tsara vintana isika fa mampiasa ny sehatra fandefasana hafatra an'ny Apple, Messages, ny faribolan'ny namana, dia tsy mila manindry ny emoticons izay atolotry ny klavier, satria ny fampiharana dia mamela antsika ho azy. soloy emojis ny teny.
Raha te hanararaotra an'io fampiasa amin'ny rindranasa Messages io isika, dia tsy maintsy manatanteraka ireo dingana izay hasehoko anao eto ambany:
Manoratra ny lahatsoratra izahay amin'ny resaka izay efa noforonintsika na mamorona vaovao.
dia nifindra tamin'ny fitendry emoji izahay manindry ny kisary maneho azy ireo.
Manaraka izany, ny fitaovanay dia hamakivaky ny teny rehetra ao amin'ny lahatsoratra sy dia hampiseho antsika amin'ny voasary ny teny izay manana emoji mifanaraka aminy.
Amin'ny fipihana ny teny amin'ny voasary, hosoloina ho azy ny teny amin'ny emoji mifanaraka aminy.
Ahoana ny fampiasana emoticons amin'ny Mac
Apple dia manome ho an'ny mpampiasa macOS rehetra, lireo andiana emoticons mitovy amin'ny iOS, anisan'izany ny dikan-teny samihafa araka ny lokon'ny hoditra.
Raha mampiasa ny kinova farany an'ny macOS ianao dia afaka mampiasa ireo emoticons mitovy amin'ny misy amin'ny kinova farany an'ny iOS misy. Raha tsy izany dia azonao ampiasaina ihanyos izay nampidirin'i Apple tamin'ny dikan-teny ampiasainao.
Tsy toy ny iOS, raha te-hiditra amin'ny emojis isika, tsy afaka manova klavier izahay, fa tsy maintsy, raha te hidirana, dia tsy maintsy mampiasa hitsin-dàlana fitendry avy amin'ny toeran'ny cursor izay tiantsika hampidirana ny emoticon.
Raha vantany vao nametraka ny cursor izay tiantsika hapetraka emoticon iray na maromaro isika dia hanery ny fanalahidy Control + Command ⌘ + Space bar. Amin'ny fipihana ny tsirairay amin'izy ireo dia haseho ao anaty lahatsoratra izy ireo.
Amin'ny alalan'ity hitsin-dàlana fitendry ity dia afaka manoratra ihany koa isika pictograms, marika ara-teknika, bala, famantarana sy marika mahazatra toy ny ⌘ ⎋ ⏎ ⎆ ⎉ ⍶ ► ◻︎ ® ☎︎
Ahoana ny fametrahana klavier amin'ny iPhone
Ao amin'ny lisitra dia mitady ny anaran'ny fiteny tiantsika hapetraka ho fitendry ary tsindrio eo amin'ny fametrahana.
Ahoana ny fanesorana klavier amin'ny iPhone
Miditra amin'ny Fikirana amin'ny iPhone avy amin'ny efijery an-trano.
Mizotra mankany amin'ny menio izahay General.
Mba hanesorana kitendry iray dia arosontsika izany miankavia ary tsindrio eo esory.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Nahoana no tsy miseho amin'ny iPhone-ko ny emoticons?
iOS dia mampitombo ny anjara tsenany vs Android izay mianjera